काठमाडौँ, चैत २३ – गर्मीमा उखुको रस पिउनुको धेरै फाइदाहरु रहेका छन् । डाक्टरहरु ..
प्रकाशराज रेग्मी, मुटुरोग विशेषज्ञ, वीर अस्पताल शरीर अनावश्यक रूपमा मोटाउनाले आज..
सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, अहिले राजमार्गका सडक पनि धुलाम्य भएका छन् । जसले गर्द..
सुदीप घिमिरे आइटी प्रशिक्षक डिआइटी सोलुसन, बागबजार कम्प्युटर चलाउँदा धेरै नै अना..
यो हो गर्ने लगेज सुरक्षाको उपाय
व्यक्तिगत, पारिवारिक या व्यावसायिक कारणले मानिसहरू फरक–फरक स्थानमा गइरहनुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै प्रयोजनमा भ्रमण गर्नुपरे पनि आवश्यक सामग्री लैजान लगेज महत्वपूर्ण हुन्छ । आफूले बोकेको लगेज कमजोर भएमा त्यसले पूरै यात्रा खल्लो बनाउन सक्छ । यात्रालाई फलदायी, स्मरणीय र रमाइलो बनाउन लगेज ब्याग छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कपटक प्रयोग ..
बच्चालाई खाना अरुचि छ, यसो गर्नुहोस्
डा. सुनीलराज मानन्धर, बालरोग विशेषज्ञ सामान्यतया नौ महिना पूरा भएपछि बच्चाले खानाको स्वाद थाहा पाउन थाल्छन् । सोही कारण यो समयपछि सधैँ एकै स्वादका खाना खुवाउँदा खाने मन गर्दैनन् । नौ महिनादेखि अढाई वर्षसम्मका केटाकेटीमा यस्तो समस्या बढी देखिन्छ । त्यसैले खानामा फरक–फरक स्वाद मिश्रण गरेर रुचि जगाउन सकिन्छ । लिटोमा अनारको रस, सुन्..
आँखामा समस्या भए यसो गर्नुहोस्
डा. इन्दुप्रसाद ढुंगेल, आँखारोग विशेषज्ञ धुलोमा नबस्ने । कुकुर, बिरालो नछुने । रुखबिरुवा र फूललाई सीधै नछुने । पालुवा पलाइरहेको रूखमुनि नबस्ने । प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने । प्रदूषित वातावरणमा नजाने । बाहिर जाँदा प्रोएक्टिभ मास्क या चस्मा लगाउने । आँखामा पानी जथाभावी नलगाउने । एसिड अल्कालिकजस्ता रसायन प¥यो भने मात्र पानी लगाउने । न..
कान्ति अस्पतालमा विस्तारित सेवा प्रभावकारी बन्यो
काठमाडौँ, चैत २० – कान्ति बाल अस्पतालमा विस्तारित अस्पताल सेवा (इएचएस) अर्थात् पेइङ सेवाअन्तर्गत दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म सुरु भएको विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको ओपिडी सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गत बुधबारदेखि सुरु भएको दिउँसो ३ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म चल्ने उक्त सेवामा हालसम्म तीन दिनमा करिब ५० भन्दा बढी बालबालिकाको उपचार भएको अस..
सुत्नुभन्दा अघि मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? हुनुहोस् सावधान ! यस्ता छन् ९ साइड इफेक्ट्स
एजेन्सी चैत २० – मोबाइल मानिसहरुको अभिन्न अंगको रुपमा विकास भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई जीवनबाट अलग्गाउनु निकै कठिन छ । यति हुँदा हुँदै पनि यसको प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढि बिढि गरियो भने यसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने गर्दछ । यस विषयमा विभिन्न अनुसन्धान पनि भइसकेको छ । यहि अनुसन्धानलाई आधार बनाएर राती मोबाइल प्रयोग..
महमा मिसाउनुहोस् मात्र एउटा ल्वाङ, जुन १० फाइदा मिल्छ त्यो विश्वास गर्नुहुन्न
एजेन्सी चैत १९ – मह र ल्वाङ दुबै स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । जब महमा ल्वाङलाई मिसाएर वा पिसेर हालिन्छ तब यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पुग्ने गर्दछ । यी दुईको सम्मिश्रणले थुप्रै रोगबाट बच्न सहयोग गर्दछ । डा. भानु शर्माले यसका १० फाइदाबारे जानकारी दिएका छन् । तौल कमः यसमा मेटाबोलिजम रेट बढाउँछ र […]
मान्यताः शनिबार घरमा नल्याउनुहोस् यी पाँच कुरा, आउनेछन् गरिबी, रोग
एजेन्सी चैत १९ – हाम्रोमा थुप्रै मूल्य मान्यता शनिबारसँग जोडिएका हुन्छन् । शनिदेवमाथि नराम्रो असर नपरोस् भनी हाम्रा पूर्वजहरुले थुप्रै नियम बनाएका छन् । ज्योतिषका अनुसार शनिको असरबाट बच्नका लागि यस्ता मान्यताहरु छन् जसलाई शनिबारका दिन हामीले गर्नुहुँदैन । आउनुहोस् यस्तै केही कामबारे जुन हामीले शनिबारको दिन गर्दा शनिदेव रिसाउँछन्..
बिहान बिर्सेर पनि नगर्नुहोस् यी ६ गल्ती, बढ्नेछ तौल
एजेन्सी चैत १९ – तौल बढ्ने समस्याले थुप्रै मानिसहरुलाई सताइरहेको हुनसक्छ । यो समस्या त्यतिबेला बढ्छ जब हामी बिहानको समयमा केही बानीलाई रुटिनमा समावेश गर्ने गर्दछौं । यी बानीको नराम्रो असर हाम्रो मेटाबोलिजम क्रियामा पर्ने गर्दछ । जसका कारण क्यालोरी ठिक तरिकाले बर्न हुन पाउँदैन जुन बोसोमा परिवर्तन हुन् गर्दछ । यस्तो अवस्थामा हाम्र..
कल्पना पौडेल काठमाडौँ, चैत १८ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भएको करिब नौ वर्षपछि नेपालमै पहिलोपल्ट ‘एबिओ इन्कम्प्याटिबल’ तथा फरक रक्त समूहको मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ । अन्य विकसित देशमा समेत विरलै प्रयोग गरिने यस्तो खालको प्रत्यारोपण विधि अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ..
यी १० प्रकारका मानिसहरु कहिले नबस्नुहोस् ब्रत, थाहा पाउनुहोस् किन्
एजेन्सी चैत १७ – धेरैजसो मानिसहरु हप्तामा एक पटक भएपनि ब्रत बस्ने गर्दछन् । नेपालमा विभिन्न तीथि, चाड वा अन्य विशेष दिनमा मानिसहरु ब्रत बस्छन् । ब्रत बस्दा स्वास्थ्य लाभ पनि हुन्छन् । तर केही रोग वा स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरुले ब्रत बस्न नहुने डाक्टरको सल्लाह छ । यसो गर्दा समस्यामा थप वृद्धि हुने डाक्टर […]
महसँग यी कुरा खान हुनसक्छ खतरनाक
एजेन्सी काठमाडौँ, चैत १६ – महको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । तर, यसको प्रयोग सही तरिकाले गरिएन भने यसले स्वास्थ्यमा खराब असर पनि पार्न सक्छ । आयुर्वेदमा यसबारे विस्तृत जानकारी दिइएको छ जसमा महलाई यी ७ कुराहरुसँग खान बन्देज गरिएको छ । घ्यु घ्यु र मह बराबर मात्रमा मिलाएर खानु हुँदैन […]
यस्ता छन् भ्याकुमका मोडल, तपाईंलाई कस्तो उपयुक्त ?
बाबाराजा श्रेष्ठ, सञ्चालक, इस्ट अफ काठमाडौं इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि धुलो नउडाई सजिलै घरका हरेक कुनाको पनि सरसफाइ गर्न सकिने कारण भ्याकुम क्लिनर अहिले हरेक घर तथा कार्यालयमा अनिवार्य नै भएको छ । अग्लो घरमा पनि सहजै पहुँँच पुग्ने भएकाले, झ्याल–ढोका, सोफाको कुनाको धुलो पनि सफा गर्न भ्याकुम उपयोगी हुन्छ । यसमा जडान गर्न मिल्ने फरक खाल..
कुन कोठामा कस्तो कार्पेट ?
घरको आन्तरिक आकर्षण तथा सजावटमा कार्पेटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले घर या कोठाको अवस्था, उपयोगिता तथा स्थानअनुसार कार्पेट छनोट गर्न विशेष विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अहिले बजारमा धेरै मोडल, कलर तथा डिजाइनका कार्पेट उपलब्ध छन् । त्यसैले टायल तथा उड फ्लोरिङजस्तै कार्पेट खरिद गर्दा पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसरी विचार नपु¥याई का..
यसकारण गर्भवतीले सकारात्मक सोचौँ
प्रा.डा. जागेश्वर गौतम, प्रसूतिरोग विशेषज्ञ, निर्देशक, परोपकार प्रसूतिगृह बिहान उठ्नेबित्तिकै व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने । अन्य समयभन्दा यो समयमा सरसफाइमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । पोषिलो खानेकुरा खाने । अन्य समयभन्दा बढी झोलयुक्त खानेकुरा खाने । नियमित सेवन गर्ने औषधि आइरन, क्याल्सियम खाने । राति आठ घन्टा र दिनमा दुई घन्टा अनिवार्य सुते..
यस्ता सामान्य गल्तीले कम्प्युटरमा समस्या
सुदीप घिमिरे, आइटी प्रशिक्षक, डिआइटी सोलुसन, बागबजार कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले सामना गर्ने धेरै समस्याहरूमध्ये डिस्प्ले नदेखिने पनि एक हो । यस्ता कतिपय सामान्य समस्या समाधान गर्ने तरिका थाहा नपाउँदा ठूलै तनाव व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामीले गर्ने सामान्य लापरबाही तथा असावधानीले यस्तो समस्या देखिन सक्छ । दैनिक प्रयोग ग..
यी हुन् सवारीचालकले बढी गर्ने सामान्य गल्ती
शिव श्रेष्ठ प्रशिक्षक, कीर्तिपुर मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट अहिले धेरै सवारीचालकहरूले ट्राफिक नियम पालना नगरेकै कारण दिनहुँ दुर्घटना हुने तथा सवारी जाम हुने हुन्छ । त्यस्तै, सामान्य जानकारी पनि नभई सवारी चलाउँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने तथा अन्य कारबाही भोगेर सही गन्तव्यमा सही समयमा पुग्न सकिरहेका हुँदैनन् । सडकको मध्यभागमा क..